Tabernakely - Wikipedia
Ny tabernakely, izay atao hoe koa tranolain'ny fihaonana, dia tranolay nisy ny Fiaran' ny Fanekena tamin' ny andron' i Mosesy (na Môizy). Ny nikarakara ny fanorenana azy dia i Beseleela izay notondroin' Andriamanitra tamin' i Mosesy.
Ny teny hebreo ilazana ny tabernakely dia ny hoe משכן / mishkan, izany hoe "fonenana" na אוהל מועד / izay midika hoe "tranolay fihaonana". Teo amin' ireo Hebreo dia toerana fanaovana fanompoam-pivavahana ny tabernakely taorian' ny fivoahan' izy ireo avy tany Egipta sy tamin' ny nakan' izy ireo ny tany Kanaana izay tantaraina ao amin' ny Bokin' ny Mpitsara, mandra-pahavitan' ny Tempoly tamin' ny taonjato faha-10 tal. J.K. Avy amin' ny teny latina hoe tabernaculum izay midika hoe "tranolay" na "tranotomboka" ny hoe tabernakely.
Ao amin' ny Testamenta Taloha dia voalaza fa fonenan' Andriamanitra vonjimaika ny tabernakely sady toerana fihaonany amin' ny vahoakany. Fonenana hita maso eo amin' ny firenena nanao azy ho andriamaniny, araka ny Bokin' ny Eksodosy (Eks. 25.8).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabernakely&oldid=1010346"
Voaova farany tamin'ny 27 Martsa 2021 amin'ny 12:25 ity pejy ity.